Horjoogayaal ka tirsan taageerayaasha Juventus oo lagu helay inay MAAFIYADA xiriir la leeyihiin | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Horjoogayaal ka tirsan taageerayaasha Juventus oo lagu helay inay MAAFIYADA xiriir la...
Horjoogayaal ka tirsan taageerayaasha Juventus oo lagu helay inay MAAFIYADA xiriir la leeyihiin
(Torino) 07 Maarso 2019 – 34 ruux oo loo xiray arimo la xiriira Maafiyada abaabulan ayaa waxaa ku jira mid ka mid ah Horjoogeyaasha taageereyaasha Juventus ee loo yaqaano ‘Bravi ragazzi”.
Andrea Puntorno waxa uu ka mid yahay 34 ruux lagu xiray magaalooyin kala duwan ee Talyaaniga ah ayaa waxaa lagu soo eedeyey dambiyo ay ka mid yihiin: ka ganacsiga daroogada, ka mid noqoshada ururo dambiyeedyo, haysasho hub sharci darro ah iyo afduub.
Sida ay qortay wakaalada wararka ANSA, Andrea waxa uu ka mid yahay horjoogeyaasha taageerayaasha Juventus kuwa loo yaqaano “Bravi ragazzi” waxaana hada ka hor lagu soo eedeeyey dambi ah ka ganacsiga daroogada waana la xiray 2012-kii iyo mar kale 2014-kii.
Waxaana horay loogu xukumay 6 sano, iyadoo laga xannibay lacag dhan 500 kun oo euro, aad ayaana loola socday dhaqdhaqaaqiisa oo il gaar ah lagu haayey isagoo loo arkay inuu khatar ku yahay bulshada.
Sida La Republica xustay, sanadihii tegey Andrea kuma howlaneyn kaliya ka ganacsiga daroogada ee waxa uu iibin jiray tigidhada suuqa madow ee kooxda Juve lacag badana wuu ka sameeyey kuwaas oo uu ku gatay labo guri iyo foorno.
Previous articleGolaha Wasiirrada oo gaarey go’aan lagu dhiirrigelinayo adeegsiga astaanta dalka ee Internet-ka
Next articleDASTUUR DADWAYNE: Ka bogo 17 qodob oo ka mid ah QAANUUNKA AAN QORNAYN ee ay bulshadu ku dhaqanto (Qaybtii 2-aad)